३१ डिसेम्बरसम्म आमाकाे इच्छा पुरा गर्ने कसम खाएका सलमानले साँच्चै पुरा गर्लान् त आमाकाे इच्छा? – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > ३१ डिसेम्बरसम्म आमाकाे इच्छा पुरा गर्ने कसम खाएका सलमानले साँच्चै पुरा गर्लान् त आमाकाे इच्छा?
admin December 31, 2018 मनोरञ्जन 0
एजेन्सी – भर्खरै ५३ वर्ष पुगेका बलिउड अभिनेता सलमान खानले आफ्नो जन्मदिन धुमधामका साथ मनाएका छन् । उनले मुम्बई नजिकै पनवेलस्थित एक फार्महाउसमा आफ्नो जन्मदिन धुमधामका साथ मनाए । संचारकर्मीले सलमान खानसँग हालखबर र नयाँ वर्षको योजनाका बारेमा कुरा गरे। सलामानका अनुसार उनकी आमा सुशीला चरक (सलमा खान) ले सलमानको जन्म दिनभन्दा चार दिन अगाडि एक माग गरेकी थिइन्।
त्यो माग उनले पुरा गर्ने बताएका छन् ।सलमानसँग आमाले रिजाल्यूशनका रुपमा केही नछोड्नु बरु सिक्स प्याक भने सधैं बनाएर राख्न भनेकी छन् ।सलमानले आफ्नी आमाको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै अनुशासित बन्ने बताएका छन्। विहान बेलुका जिम गर्नुका साथै विहान सधैं दौडिने पनि गरेका छन्। सलमानसँग उनकी आमाले सिक्स प्याक बनाउनु कुनै ठूलो कुरा नभएको पनि बताएकी थिइन्। सलमानले ३१ डिसेम्बरमा सिक्स प्याक एब्स आफ्नी आमालाई उपहार दिएका थिए।